အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်: Jan 28, 2010
ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ပြုံးစရာ (၁)
Posted by ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) at Thursday, January 28, 2010 Thursday, January 28, 2010 Labels: ပျော်ပျော်ပါးပါး ဟာသများ
တစ်နေ့ လင်ယောက်ျားနဲ့ သူ့မိန်းမ ဖြစ်သူတို့ဟာ စားသောက်ဆိုင် ကောင်းကောင်းတစ်ခုမှာ ညနေစာ စားသောက်နေကြပါတယ်… အဲလို စားနေချိန်အတွင်းမှာ ဆွဲဆောင်မှုကောင်းတဲ့ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ် လှလှပပ အမျိုးသမီးလေး တစ်ယောက်ဟာ သူတို့ ၂ယောက်စားနေတဲ့ စားပွဲကို လျှောက်လာပြီး ယောက်ျားဖြစ်သူကို နမ်းလိုက်ကာ
“ ကျွန်မတို့ မကြာခင်မှာ တွေ့ရအောင် ” လို့ပြောပြီး အဝေးကို ထွက်ခွာသွားပါတယ်.. အဲဒါကို မြင်တဲ့ သူ့မိန်းမက ယောက်ျားဖြစ်သူကို မေးပါတယ်.. "သူက ဘယ်သူလဲ ".. ယောက်ျားဖြစ်သူကလဲ ပြန်ဖြေပါတယ်.. “ သူက ငါ့ရဲ့ အပျော်မယား ပါကွာ.. ” တဲ့
ဒီတော့ မိန်းမဖြစ်သူက “ အော.. ရှင်က အဲလိုလား… ဒါဆိုရင် ရှင့်ကို ကျွန်မ မပေါင်းတော့ဘူး… ကွာမယ် ”
“ အင်း ..ငါနားလည်ပါတယ်လေ.. ဒါပေမဲ့ ငါ့ကိုကွာမယ်ဆိုရင် မင်းတစ်ခု စဉ်းစားရမှာက ပြင်သစ်ကို ဈေးဝယ်ထွက်ဖို့ အခွင့်အရေး မင်းမှာ ရှိတော့မှာ မဟုတ်ဘူး.. ကရစ်ဘီယမ် ပင်လယ်ကိုလဲ အပျော်ခရီး ထွက်ခွင့် မရှိတော့ဘူး.. ပြီးတော့လဲ တစ်ခြားအခွင့်အရေး အများကြီး မင်းဆုံးရှုံးရဦးမယ်.. ဒီတော့ မင်းဘာသာမင်း ဆုံးဖြတ်ပါ…”
ထိုအချိန်လေးမှာ သူတို့၂ယောက်လုံးနဲ့ ရင်းနှီးတဲ့ အမျိုးသားတစ်ဦးဟာ ခပ်ချောချော အမျိုးသမီးနဲ့ တွဲပြီး စားသောက်ဆိုင်ထဲကို ၀င်လာ ပါတယ်.. မိန်းမက ယောက်ျားဖြစ်သူကို မေးလိုက်ပါတယ်.. “ ဂျင်မ် နဲ့တွဲလာတဲ့ မိန်းခလေးက ဘယ်သူလဲ ”… သူ့ယောက်ျားက “ အဲဒါ ဂျင်မ် ရဲ့ အပျော်မယား ” လို့ပြန်ဖြေပါတယ်..
မိန်းမဖြစ်သူပြန်ပြောလိုက်တဲ့ စကားက “ အိုး ကျွန်မတို့ဟာက သူ့အပျော်မယား ထက် ပိုချောတယ်. ” တဲ့
လူနှစ်ယောက်ဟာ ၀က်ဝံဖမ်းဖို့ တောထဲကို ထွက်လာကြတယ်.. တောထဲက သစ်လုံးအိမ်ထဲမှာ ခေတ္တ အပန်းဖြေကြရင်း တစ်ယောက်သောသူက ၀က်ဝံ အရှာထွက်ဖို့ သစ်လုံးအိမ်ကနေ ထွက်လာခဲ့တယ်… မကြာခင်မှာ ကြီးမားလှတဲ့ ၀က်ဝံကြီးနဲ့ တွေ့တဲ့အခါ ပါလာတဲ့ သေနတ်နဲ့ ပစ်သော်လည်း ၀က်ဝံကြီးမှာ ဒဏ်ရာရယုံသာ ရသွားခဲ့ပါတယ်…
ဒေါသထွက်နေတဲ့ ၀က်ဝံဟာ ရန်မူဖို့ သူ့ဘက်ကိုလှည့်လာပါတယ်.. သူက ရိုင်ဖယ် သေနတ်ကို ပစ်ချလိုက်ပြီး ဖနှောင့်နဲ့ တင်ပါး တစ်သားတည်း ကျအောင် သစ်လုံးအိမ်ဘက်ကို ပြန်ပြေးပါတယ်… ဘယ်လိုပင် မြန်သထက် မြန်အောင် ပြေးသော်လည်း ၀က်ဝံအပြေးနှုန်းက သူ့ထက် အနည်းငယ် မြန်တဲ့ အတွက် မှီလုမှီခင် ဖြစ်လာပါတယ်…
သူက သစ်လုံးအိမ်ရဲ့ ပွင့်နေတဲ့ တံခါးနားရောက်တဲ့အခါ ခလုတ်တိုက်ပြီး မှောက်ရက် လဲကျသွားပါတယ်.. သူ့နောက်က ထပ်ချပ်မကွာ လိုက်လာတဲ့ ၀က်ဝံဟာ လဲကျနေတဲ့ သူ့ကို ခလုတ်ပြန်တိုက်မိပြီး သစ်လုံးအိမ်ထဲ အရှိန်နဲ့ ၀င်ရောက်သွားပါတယ်..
သူက ကဗျာကယာ ခုန်ထလိုက်ပြီး သစ်လုံးအိမ်တံခါးကို အပြင်ကနေ ပိတ်လိုက်ပါတယ်.. ပြီးနောက် သူ့သူငယ်ချင်းကို အော်ပြောလိုက်တယ်..
“ ငါ ၀က်ဝံတစ်ကောင် သွားထပ်ဖမ်းနေတုန်း ဒီအကောင်ကို မင်း အရေခွံ ဆုတ်ထားလိုက်..” ဟူ၍ ဖြစ်ပါတယ်…
ရှေ့နေနဲ့ အင်္ဂျင်နီယာ ဥာဏ်ရည်ဘယ်သူကသာ
ရှေ့နေသုံးယောက်နဲ့ အင်္ဂျင်နီယာ သုံးယောက်တို့ဟာ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ တစ်ခုကို တက်ရောက်ကြဖို့ ဘူတာရုံကို ရောက်နေပါတယ်.. ရှေ့နေသုံးယောက်ဟာ ရထားလက်မှတ် အသီးသီး ၀ယ်ကြပြီး အင်္ဂျင်နီယာ သုံးယောက်ကတော့ လက်မှတ် တစ်စောင်တည်းသာ ၀ယ်ပါတယ်..
“ မင်းတို့ ၃ယောက်က လက်မှတ်တစ်စောင်ထဲနဲ့ ဘယ်လိုများ ခရီးသွားမလို့လဲ… ” လို့ ရှေ့နေတွေက သူတို့ကိုမေးပါတယ်..
“ စောင့်ကြည့်လေ… မကြာခင် တွေ့မှာပေါ့” လို့အင်္ဂျင်နီယာတွေက ပြန်ပြောပါတယ် …
ရထားပေါ်ရောက်တဲ့အခါ ရှေ့နေတွေက သူတို့ဝယ်ထားတဲ့ နေရာ အသီးသီးမှာ ၀င်ထိုင် လိုက်ကြပေမဲ့.. အင်္ဂျင်နီယာ သုံးယောက်ကတော့ ရထားရဲ့ စားသောက်တွဲကို ထွက်သွားပြီး အထဲကနေ တံခါးကို ပိတ်ထားလိုက်ပါတယ်.. မကြာခင်မှာ ရထားလက်မှတ်စစ်ဟာ လက်မှတ် များကို လိုက်လံ စစ်ဆေးဖို့ ရောက်လာပါတယ်.. တစ်နေရာပြီးတစ်နေရာ စစ်ဆေးနေရင်း စားသောက်တွဲထဲကို တံခါးခေါက်ပြီး
“ ကျေးဇူးပြုပြီး လက်မှတ် ပြပါ.. လက်မှတ် ” လို့ အော်လိုက်ပါတယ်..
တံခါး အနည်းငယ် ဟသွားပြီး အထဲမှ လက်တစ်ဘက် ထွက်လာကာ ရထားလက်မှတ်ကို လက်မှတ်စစ်ထံ လှမ်းပေးလိုက်ပါတယ်… လက်မှတ်စစ်လဲ စစ်ဆေးပြီးနောက် လက်မှတ်ကို သိမ်းလိုက်ကာ ပြန်ထွက်ခွာသွားပါတယ်..
အင်္ဂျင်နီယာတွေရဲ့ နည်းကို အရမ်းသဘောကျသွားတဲ့ ရှေ့နေတွေဟာ အပြန်ခရီးလဲကျရော ရထားလက်မှတ် တစ်စောင်တည်းသာ ၀ယ်ပါ တော့တယ်… ဒီတစ်ကြိမ်မှာ အင်္ဂျင်နီယာတွေ ကတော့ တစ်စောင်မှ မ၀ယ်တော့ ပါဘူးတဲ့..
“ လက်မှတ်မပါဘဲ ဘယ်လိုများ သွားကြဦးမလို့လဲ ” ရှေ့နေတွေက မေးပြန်တယ်..
“ စောင်ကြည့်ပါ ” လို့ဘဲ အင်္ဂျင်နီယာတွေက ပြန်ဖြေတယ်….
ရထားပေါ်ရောက်တော့ ရှေ့နေတွေက စားသောက်တွဲ တစ်ခုထဲ ၀င်ရောက်ပြီး တံခါးကို ပိတ်ထားလိုက်တယ်.. အင်္ဂျင်နီယာ သုံးယောက်က နောက် စားသောက်တွဲ တစ်ခန်းကို ၀င်သွားပါတယ်.. ရထားထွက်ပြီး မကြာခင်မှာ အင်္ဂျင်နီယာ တစ်ယောက် ထွက်လာပြီး ရှေ့နေတွေ ရှိနေတဲ့ စားသောက် တွဲကို တံခါး သွားခေါက်ပါတယ်..
“ ကျေးဇူးပြုပြီး လက်မှတ်ပြပါ..”
စားသောက်တွဲအတွင်းမှ လက်တစ်ဖက် ထွက်လာပြီး အင်္ဂျင်နီယာကို လက်မှတ် လှမ်းပေးလိုက်ပါတယ်.. အင်္ဂျင်နီယာက လက်မှတ်ကိုယူပြီး ကျန်၂ယောက်ရှိနေတဲ့ စားသောက်တွဲဘက် ထွက်သွားပါတော့တယ်…
The Mistress, Catching the Bear , Lawyers and Engineers ကို ဘာသာပြန်ပါသည်။